Ọ bụ kwesịrị ịzụ a nkịtị, fanless PC? - News Ọchịchị
Ọ bụ kwesịrị ịzụ a nkịtị, fanless PC?
Isiokwu a na-akpọ “Ọ bụ kwesịrị ịzụ a nkịtị, fanless PC?” e dere site Jack Schofield, n'ihi na theguardian.com on Thursday 19 November 2015 09.12 UTC
Bụ fanless PC ugbu a a ezi uche zuo? M na-eme a otutu ndekọ olu na echiche nke a n'obi n'ezie nkịtị PC bụ nnọọ mara mma. Peter
-Adịbeghị anya innovations na PC ahịa e tinyeworo amị ọnụ ala karịa fanless PC, ezie na ọ bụghị n'ezie ihe mgbaru ọsọ. E lekwasịrị anya bụ na-amị thinner laptọọpụ na mbadamba, ma ndị a nwere nnukwu nsogbu dissipating okpomọkụ. Intel ebu nsogbu a site na nke nta nke nta na mbenata ego nke ike ya ibe-aṅụ. Ugbu a, ha adịghị enweta dị ka ọkụ, na ha nwere obere mkpa n'ihi na Fans.
Ọmụmaatụ, a nnọọ ngwa ngwa desktọọpụ processor dị ka Intel Core i7-4960X nwere a TDP (thermal imewe ike) nke 130W, nke bụ na-ekpo ọkụ. Laptọọpụ na-eji nwere 45W ma ọ bụ 35W processors, nke dara na 15W ka 17W maka mkpa ígwè ọrụ. Intel si Core M nso me na ala 4.5W. taa, ọbụna ọnụ ala Intel Atọm dabeere ibe (mgbe Pentium ma ọ bụ Celeron ewere) na-agba ọsọ na 6-10W.
E nwere drawbacks. Mgbe ndị a ibe na-ekpo ọkụ, ọrụ ha nwere na-throttled, ma ọ bụ na ha na-mechie kpam kpam. Nke a dị mma maka intermittent ojiji dị ka okwu nhazi na weebụ nchọgharị. Otú ọ dị, a ibe adabara ẹkama nhazi ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka video edezi na-egwu ya edekọ, na ha nwere ike ọgụ na mgba audio Ịgwakọta na-edezi.
Olee otú ọtụtụ ndị Fans?
A dị ike na desktọọpụ PC nwere ike atọ ma ọ bụ karịa Fans. The CPU na ike ọkọnọ ga nwere onwe ha Fans, na otú a ga-ebu ọnụ ndịna kaadị na GPUs (ndịna-emeputa nhazi nkeji). Mgbe ụfọdụ,, iche iche ikpe Fans ga igbasa ikuku na-disk draịva na n'akụkụ ndị ọzọ ezi uche jụụ.
N'ezie, mkpa laptọọpụ na mbadamba-agba ọsọ si batrị, ya mere, ha na-adịghị mkpa esịtidem ike onunu. Ma ọ bụ ka ha nwere dị iche iche ndịna kaadị: ha na-emekarị nwere GPUs ike na processor, dị ka "Intel Integrated Graphics".
Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa a otutu ike, mgbe ahụ, e nwere ọtụtụ obere, ọnụ ala PC na-eji otu teknụzụ dị ka mkpa laptọọpụ. Ha bụ ndị ma fanless, ma ọ bụ ha Fans ndị fọrọ nke nta noiseless, ma e wezụga mgbe processor na-chụpụrụ ike.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ elu arụmọrụ maka ihe aga-eme otú ahụ dị ka video edezi ma ọ bụ oké njọ Ịgba Cha Cha, mgbe ahụ, ọ bụ ka a ịma aka. Ị nwere ike mkpa a fanless ike ọkọnọ na ndị ọzọ otutu-abịaru nso ka jụrụ. a na-agụnye okpomọkụ ọkpọkọ - nke bụ esiwanye nkịtị na mkpa laptọọpụ - na mgbe ụfọdụ mmiri mmiri jụrụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe obere ma dị ọnụ ala, e nwere ihe na-emebu plethora nke oke: -achọ "Mini PC"On Amazon.co.uk ọkọkpọhi ihe karịrị otu puku na-arụpụta. Ịchọ "nettop PC"Okụt a ọzọ gh 34 pụta, n'ihi na a okwu nke na-akasị ama esịn nke anyị. Ọ bụghị ihe niile ndị a ígwè ọrụ na-fanless, ma ọtụtụ ga na-agba ọsọ na-eji nwayọọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ṅụbigara.
People a itinye ndị a na usoro ka ha ewepụghị-ihuenyo TV tent: ha na-na mma video gụgharia, enwetaghị-up TV ọrụ, na mfe Mgbakọ. Ha nwekwara ike na-agba ọsọ ụdịdị dị iche iche, MAME na ndị ọzọ na egwuregwu emulators.
Mgbe ala ọgwụgwụ, e nwere ọnụ ala usoro dị ka ndị fanless Voyo sleek Mini PC. Nke a nwere a 1.33GHz Intel Atọm Z3735F, 2GB nke ebe nchekwa na 64GB nke eMMC mgbawa nchekwa na a 4K HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri maka naanị £ 89,99. Ọ bụ nnọọ otu ihe ahụ spec dị ka ihe ntinye-larịị 10in Windows laptọọpụ ma ọ bụ 2 na-na-1, ma na-enweghị keyboard na ihuenyo. Ọ na-agba a 32-bit Windows 8.1With Bing (Ikekwe ndị free version), ma na-akawanye a free upgrade na Windows 10.
Sumvision si naa bụ a mma-mara ọzọ na yiri nkọwapụta maka £ 98,50. The gigabyte Brix nso bụkwa uru a anya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọzọ dị ike, n'ebe ahụ bụ Eggsnow nso nke fanless, aluminum mini PC. a na-agụnye Core i3-4010U ma ọ bụ Core i5-4200U nsụgharị na 4GB nke ebe nchekwa na a 64GB SSD maka £ 212,99 na £ 248,99 karị. Otú ọ dị, ha nwere ike na- 16GB nke na ebe nchekwa, ruo 256GB SSDs, na ruo 1.5TB ike draịva. Ị pụrụ ịzụta a isi Core i3 usoro maka £ 156,99 na dabara gị onwe gị na ebe nchekwa na SSD.
The Eggsnow ụdị mpi na Apple si Mac Mini, nke na-amalite na £ 399 maka a Core i5 usoro na 4GB nke ebe nchekwa na a 500GB ike mbanye, na n'elu si na £ 799 n'ihi na otu onye na 8GB na a 1TB mbanye (ma ọ bụ £ 1.759 na niile upgrades). Otú ọ dị, ọhụrụ 2014 Mac Mini ka soldered-na ebe nchekwa na bụ n'ihi ihe update.
Iwuli jụụ PC eji na-abụ art na aka pụrụ iche components, dị ka fanless ike onunu na mmiri mmiri jụrụ, kwukwara damping maka n'usoro draịva, na-aṅa ntị na airflow site ikpe. m na-ewere Chillblast ka eme ụfọdụ n'ime ndị a. Otú ọ dị, ihe na-adị mfe taa, n'ihi na ụlọ ọrụ nwere ike na-amalite na barebones ikpe dị ka Shuttle na obere ITX motherboards, ma ọ bụ dị na-eji a obere Intel NUC (Next Unit nke Computing).
The NUC-emekarị na-agụnye a nnukwu heatsink na a obere onye ofufe, otú ahụ ka m ga-atụ anya na ihe anya-na-na-adịghị adị version ga-agbachi nkịtị. Otú ọ dị, ụfọdụ ụlọ ọrụ e mere NUC ikpe na, na kachasi mkpa, na-arụ ọrụ dị ka nnukwu okpomọkụ echekwa. O doro anya na, ị ga na-agba ọsọ otu na a bizi ohere, ma na nkịtị ọnọdụ, ha nwere ike radiate ezuru okpomọkụ na-anọ n'ime TDP ókè.
Jụụ PC si UltraNUC bụ ihe atụ, na usoro a na-ewu-na-iji na UK. The UltraNUC Atọm version amalite na £ 325, mgbe Abel-cased UltraNUC Pro fanless amalite na £ 595. Jụụ PC na-enye ọtụtụ ndị ọzọ na nkịtị ma ọ bụ jụụ PC, media emmepe na ntụrụndụ usoro, otú i nwere ike ịhụ ihe na-suut gị mma.
Aleutia si R50 Fanless - "pịrị na deere na UK" - bụ a siri ike ma classy-na-achọ NUC variant. Otú ọ dị, Ọ bụ n'ezie zubere maka ulo oru na azụmahịa ojiji. An R50 ọkọlọtọ na a Core i3, 4GB nke ebe nchekwa na 60GB SSD efu £ 599. Aleutia nwekwara akanyam a T1 nettop "eco PC"Na a Celeron J1800 na 2GB nke na ebe nchekwa maka £ 349, ma ọ bụ na 4GB, a 120GB SSD na Microsoft Windows maka £ 499. Obere Green PC bụ ihe ọzọ soplaya.
Na niile n'elu ikpe, abụọ-ego na-ahụ ma ọ bụrụ na price na-agụnye a oyiri nke Windows. Ọtụtụ ime, ma ụfọdụ mini PC na-ere na-enweghị ihe sistemụ maka ndị chọrọ na-agba ọsọ Linux.
Kacha n'oge a desktop ugbu a na-agba ọsọ na-eji nwayọọ, ma e wezụga mgbe mesiri, na-emekarị n'ebe ala-TDP Atọm processors na SSDs na-eme ka ha ọbụna were dị jụụ. (Ị nwere ike ịlele TDPs na benchmarks nke dị iche iche na ibe na Notebookcheck si Comparison of Mobile Processors.)
The ajụjụ gị ugbu a nwere na-aza na- (a) ole ike ime gị mkpa, na (b) ole ị na-akwadebe iji kwụọ ụgwọ maka nkịtị?
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka E ke otu ụlọ dị ka gị PC, iburu n'uche na a òké-wheel nwere ike ime ka a na ịpị mkpọtụ - ee, M na a na-ejide site na - na keyboard na ojiji bụ eleghị anya nke ajụjụ. E nwere mgbe ụfọdụ a aka-na ihuenyo nwere uru nke ịbụ jụụ.
33627	0 Nkeji edemede, jụọ Jack, Mgbakọ, Atụmatụ, Jack Schofield
← Previous Post Mgbe niile i nwere bụ a hama, Isis anya dị ka a ntu →